Mareykanka oo sheegay in ay dan ugu jirto cudurka Coronavirus - BBC News Somali
Mar uu la hadlayay telefishenka Fox News ee dalka Mareykanka ayaa Wilbur wuxuu sheegay "in cudurka Shiinaha ka dilaacay ay soo dedejin doonta shaqooyin badan oo dib loogu soo celiyo Waqooyiga Mareykanka".
Mar xoghayaha wax laga weydiiyay khatarta cudurkan uu ku yeelan karo dhaqaalaha Mareykanka ayaa waxaa uu yiri: "xaqiiqdii waa arrin u wanaagsan ganacsiga, marka waxay ila tahay inay soo dedejin doonta shaqooyin badan oo dib loogu soo celiyo gudaha Mareykanka, sarena u qaadi doonta dhaqaalaheena".
Xigashada Sawirka, Fox News
Wilbur Ross-Xoghayaha maaliyadda ee Mareykanka
"Waa muhiim in la eego cawaaqibka ka dhalan kara in ganacsi lala sameeyo dal taariikh dheer u leh in uu qariyo khatarta dhabta ah ee uu ku hayo dadkiisa iyo dalalka caalamka", ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda ee Mareyankanka.
Don Beyer oo kasoo jeeda xisbiga mucaaradka ee dimuqraadiga ayaa su'aal gelisay ganacsi iyo faaido laga sameeyo cudur dilaa ah oo dhibaato ba'an ku haya dad rayid ah.
Hay'adda caafimmaadka adduunka ee WHO ayaa caabuqa corona ee ka dilaacay dalka Shiinaha u aqoonsatay xaalad caafimaad oo degdeg ah.
Caabuqa Corona ayaa Shiinaha ka dilaacay bilo kahor
Saraakiisha caafimaadka ee Shiinaha ayaa sheegay in dadka uu haleelay xanuunka corona ay haatan tiradoodu gaareyso ku dhawaad toban kun, halka 210 qofna ay u dhinteen.
WHO ayaa walaaca ugu weyn ee ay qabaan ku tilmaamtay haddii cudurkan uu ka dilaaco dalalka hannaankooda caafimmaad uu hooseeyo oo aan awoodin inay ay la tacaalaan. Cudurkan ayaa haatan ku faafay 18 dal oo caalamka.
Khubara dhanka dhaqaalaha ayaa sheegay in cudurka uu saameyn ba'an ku reebi doona dhaqaalaha caalmka, taas oo ay shegeen in ay ka darnaan doonta xanuunkii SARS.
Xanuunka SARS oo 17 sano kahor ka dilaacay isla dalka Shiinaha ayaa waxa auu haleelay dad gaaraya 8 kun, halka 700 oo qofna ay u dhinteen, waxaana uu caalamka ku keenay khasaaro dhaqaale oo dhan 30 bilyan oo doolar.
Hergabka ama caabuqa corona ayaa shirkado badan oo ka hawlgeli jiray dalka Shiinaha oo ay kamid yihiin kuwa sameeya baabuurta iyo shirkadaha tiknolojiyadda ku qasbay inay xiraan xafiisyadii ay ku lahaayeen Shiinaha.
Shirkado badan oo Mareykan ah ayaa dalka Shiinaha ka furtay xafiisyo waaweyn oo wax soo saar badan leh, maadaama dalka Shiinaha ay shirkadahaas ka helayaan xirfadleyaal ku shaqeeya mushaar ka yar kan Mareykanka.